Koox Daneedyaddu Istiigad kuma Tiri Karaan Waxqabadka Maareeyaha TV-ga Qaranka | Salaan Media
Home Articles Koox Daneedyaddu Istiigad kuma Tiri Karaan Waxqabadka Maareeyaha TV-ga Qaranka
Koox Daneedyaddu Istiigad kuma Tiri Karaan Waxqabadka Maareeyaha TV-ga Qaranka
Waxay iska noqotay dhaqanno dabiici ah oo joogto ah in dadka qaar ay masuuliyiinta adeegyadda u haya bulshadda ay burush wasakhle la dabo-socdaan si ay istiigad ugu masaxaan dedaalkooda shaqo iyo waxqabadkoodaba.
Waxaan is idhi arrintaasi waxa xudun u ah shaqo la’aanta badan oo dadku iskuma jiraan in badan ka dhigtay fadhi ku dirir ay wagartu shaqayso. Todobaadyadii la soo dhaafay waxaan mareegaha Internet-ka qaarkood ku arkayay maqaalo is dabo-joog ah oo lagu aflagaadeynayo Maareeyaha Guud ee Telefishanka qaranka Md. Khadar Xasan Cali Gaas oo marka dar ILAAHAY loo hadlo waa Ramadaane’ wax uu ku soo kordhiyo mooyee aan waxba ka ridin Telefishanka qaranka muddo sanad ku siman oo uu xilkaasi hayay.
Dadkan wax durayaa kama ah inay wax saxaan ama toosiyaan ee waxay had iyo jeer u badan koox daneedyo hunguri kaga jiray mansabka maamul ee maareeyuhu hayo, kuwo shaqo qasab ah ka doonaya iyo kuwo si caadifad ah iskaga eryanaya.
Lama diidana in wax la dhaliilo oo tilmaantu waa mid furan hase yeeshee tan dadka qaar caadada u noqotay waa mid u jeedooyin fog leh oo ka dhigan “Cadyahow ku cunay ama ku ciideeyay”, yeelkadoode’ eedahoodu waa qaar faaruq ah oo madhan, hase yeeshee shakhsi weerar uun daaran.
Waxaan kooxahaasi oo qaarkood macruuf ah odhan lahaa waxba ha daalina ILAAHAY inta uu u qoray Maareeyaha TV-gu kursigiisa wuu ku fadhiyayaa, maalinta uu bariiskiisu ka dhammaadana wuu ka tagayaaye’.
Ta labaad waxaan jeclaan lahaa inaad si kor ka xaadis ah u guud maro qodobo dhawr ah oo TV-ga u tis-qaaday intii uu majaraha u hayay Maareeye Khadar Xasan Cali.
1-waxa uu toosiyay tayadii barnaamijyadda ka baxa TV-ga, waxaanu ku soo kordhiyay dukumantariyo, barnaamijyo cilmi korodhsi ah, kuwo diini ah iyo kuwo madadaallo ah.
2-waxa uu nidaamiyay oo joogteeyay tiradda barnaamijyadda.
3-Wararka TV-ga oo la hagaajiyay iyo saacadihii TV-ga oo wax laga bedalay, waana TV-ga warkiisu ugu hor-baxo.
3-SLNTV waxa uu buuxiyaa maalin walba in ka badan toban saacadood oo xidhiidh ah oo barnaamijyo isdabo joog ah.
4-TV-gu waxa uu ku dacfaray oo uu soo kordhiyay barnaamijyo iyo warar Live loo baahiyo, oo aan laga xaqiri Karin. Tusaale ahaan munaasibaddaha waaweyn ee dalka iyo dibadiisaba ka dhaca.
5)-Tv-gu waxa uu balaadhiyay hogga uu ka degan yahay Satalayt-ka.
Way jiraan waxyaabo u dhiman oo qorshaha ugu jira inay fuliyaan maamulka Telefishanka iyo shaqaale weynaha ka hawl-galaaba, hase yeeshee ma mudna in waxqabadkooda iyo dedaalkooda la iska indho tiro oo loo raadiyo boogo aan jirin iyo fadeexado la mar-mariyay cid aan waxba qabin.
Si kastaba ha ahaatee waxaanu ku boorinaynaa Maareeyaha TV-ga Qaranka inuu dhegaha ka furaysto Maqaaladda sumaysan ee lagu faafiyo mareegaha cadhada qaba ee loo furtay aflagaadada iyo in dadka la ribeeyo. Waxaan kugu hambalaynayaa waxqabadka aad muujisay mudadii aad xafiiska joogtay, waxaanan kuu rajaynayaa inuu EEBE kugu guuleeyo qodobadda aad maskaxda ku hayso ee qorshaha dhow kuugu jira inaad ku horumariso TV-ga qaranka.
Samatar Nuux Ileeye